झापाका कृषकले फलाए साढे पाँच अर्बको तरकारी
सुरुङ्गा (झापा), ३० असोज । झापाको शान्तिनगर, बाहुनडाँगी, शनिश्चरे, चकचकी, पाँचगाछी, पथरीया र दमक तरकारी खेतीका लागि जिल्लामा चिनिएका गाविस र नगरपालिका हुन् । यहाँका झण्डै दश हजार कृषकले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय झापाले जनाएको छ । झापामा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा हिउँदे तरकारी तीन हजार ६५० हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय झापाका प्राविधिक सहायक शालीग्राम भट्टराईले बताउनुभयो । त्यस्तै वर्षे तीन हजार २६० हेक्टर क्षेत्रफल र वेमौसमी तरकारी ८४० हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुँदै आएको जिल्ला कृषि...
घट्ने भयो धान उत्पादन
लुम्बिनी (रुपन्देही), २६ असोज । धान उत्पादन हुने प्रमुख जिल्लामध्येको रुपन्देहीमा यो वर्ष धान बालीको उत्पादनमा कमि आउने अनुमान गरिएको छ । धान बाली उत्पादनका लागि अनुकुल मौसम र प्रयाप्त पानी नपरेका कारण यस वर्ष धान उत्पादनमा कमी आउने कृषि विज्ञहरुले जनाएका छन् । तराईका जिल्लामा परेको लामो समयसम्मको खडेरी र दोस्रो पटक राख्नुपर्ने रसाईनिक मल राख्न नपाएका कारण यसवर्ष जिल्लामा धान उत्पादनमा गिरावट आउने संकेत देखिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । पहिला रोपिएको धानमा खासै असर नपरेपनि पछौटे धानमा खडेरीको पूर्णअसर परेको कार्यालयको भनाइ छ । पछौटे...
धान निर्यात गर्ने नेपाल कसरी बन्यो आयातकर्ता ?
आश्विन २२, २०७२- कहलिएका बुद्धिजीवी डा. हर्कबहादुर गुरुङ विपरित धारमा एक त्यस्ता पात्र देखापरे, जो २०४५ चैत १० को भारतीय नाकाबन्दीसँगै ‘खुसी’ भए । सँगै नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी गरेकामा उनी भारतलाई ‘धन्यवाद’ समेत दिन चुकेनन् । उनको त्यो विपरित धारको अभिव्यक्तिलाई धेरैले आश्चर्यजनक रुपमा लिए । तर उनको अभिव्यक्तिमा अन्तर्निहित ‘राष्ट्रियता’प्रतिको गहिरो भावनाका कारण कसैबाट आलोचना आएन । खासमा उनले नेपालीको ‘अल्छी स्वभाव’बारे कटाक्ष गरेका थिए । उनले भनेका थिए– ‘नेपालमा ठूला जिम्मेवारी लिने तर साना कर्तव्य पनि पूरा गर्न नसक्ने, रातारात मालामाल...
खडेरीले धान खेतमै सुक्यो
बार्दिवास, २० असोज । लामो खडेरीले धानको बोट खेतमै सुकेपछि महोत्तरी जिल्लाका किसान चिन्तित भएका छन् । जिल्लाकै मुख्यबाली मानिएको धान खेतमै सुक्दै गएपछि किसानको चिन्ता बढेको हो । यसपाली बर्षा याममा पनि पर्याप्त पानी नपर्दा धान रोपाइँमा समस्या भएको थियो । इनार, बोरिङ्गमा दमकल (पम्पसेट)लगाएर किसानले धान रोपेका थिए । भङ्गाहा–३ का किसान सत्यनारायण यादवले भन्नुभयो, “भदौ १५ यता पानी नपरेको र लगातारको आन्दोलनले गर्दा डिजल पाउन नसकेपछि पम्पसेट पनि चलाउन नपाएर धान खेतमा सुक्यो ।” जिल्लामा यसपाली अल्प बर्षा भएकाले रोपाइँ पनि ४० हजार हेक्टरमा मात्र हुन सकेको...
बढ्दैछ उन्नत जातका पशुपालन व्यवसाय
पाल्पा, १९ भदौ । व्यावसायिक पशुपालनबाट मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि यहाँ युवा यस पेसातर्फ आकर्षित भएका छन् । बङ्गुर, बाख्रा, गाईभैँसी पालनलगायतका क्षेत्रमा सजिलै आम्दानी हुन थालेपछि युवाले उन्नत प्रजातिका पशुपालन व्यवसाय रोज्न थालेका हुन् । स्थानीय जातका पशुपालनबाट भन्दा उन्नत जात पशुपालनबाट छिटो आम्दानी हुने भएपछि किसानको रुचि यसैतर्फ बढेको छ । उन्नत जातका बाख्रा र बङ्गुरबाट छिटो मासु तयार हुन्छ । जिल्लाका किसान उन्नत जातका पशुपालन गरी मासु उत्पादनतर्फ केन्द्रित भएपछि यो मासुमा पाल्पा आत्मनिर्भर बनेको छ । बा¥ह गाविसमा ६१ वटा बाख्राका फार्म सञ्चालित...
धानखेतीमा पात बेरुवा रोग फैलियो
गोरखाबजार, १७ भदौ । धानखेती गरिएको गोरखाको फाँटमा पात बेरुवा रोग फैलिएको छ । दरौँदी, भुसुण्डे, सिर्दी, मस्र्याङ्दी, बूढीगण्डकी, चेपे खोलालगायत किनारका खेतमा लगाइएको धानबालीमा पात बेरुवा रोग फैलिएको किसानले बताएका छन् । छोप्राक गाविसका किसान नवीन्द्र कुमालका अनुसार हरियो किरा (लार्भा) ले धानको पात बेर्छ । धानको पात बेरिएर सुक्न सुरु गरेको भन्दै किसान कुमालले बेरुवा रोगबाट मुक्तिका लागि घरेलु प्रविधिको प्रयोग गरिएको बताउनुभयो । “धानखेतीमा बयर र ऐसेलुको बिरुवा घिसारेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “काँडाले बेरिएको धानको पात छुट्याउँछ भने हरियो किरा भुइँमा...
रुस–पश्चिम तनावको असर नेपाली दूधमा
काठमाडौं-पश्चिमा देश र रुसबीच पछिल्लो समय बढेको तनावको असर नेपाली दूध बजारमा पर्न थालेको छ। केही समययता महाशक्ति अमेरिका लगायत पश्चिमा देश र रुसबीच मनमुटाव बढेको छ। यही मौकामा रुसले ती मुलुकबाट हुने दूध र दुग्धजन्य पदार्थ आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। ठूलो बजारमा बिक्री गर्न नपाएपछि पश्चिमा देशका दुग्ध उत्पादकहरु मूल्य घटाउन बाध्य भए। त्यसको असर नेपाली बजारसम्म आइपुग्यो। विश्व बजारमा पाउडर दूधको मूल्य घटेको मौका छोपेर यहाँका डेरी उद्योगले आयातित पाउडर प्रयोग गर्न थाल्दा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दूध नबिक्ने समस्या आएको हो। युक्रेन समस्याको कारण...
एक करोडको अलैँची बिरुवा बिक्री
इलाम, १६ भदौ । जिल्लाबाट एक वर्षमा रु एक करोड बराबरको अलैँचीका बिरुवा बिक्री भएको छ । जिल्लाको फिक्कलमा रहेको अलैँची विकास केन्द्र र जिल्ला कृषि विकास कार्यालय तथा अलैँची बिरुवा उत्पादक किसानले बिरुवा बिक्री गरेका हुन् । अलैँची विकास केन्द्रले उत्पादन गरेको बिरुवा काठमाडौँ, नुवाकोट, गोरखा, कास्की, रोल्पा, स्याङ्जा, पाँचथर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङका साथै इलाममा समेत गरी पाँच लाख बढी उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरिएको केन्द्रका प्रमुख पदमप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । यहाँबाट सबैभन्दा बढी जिल्लाकै किसानले करिब डेढ लाख र कृषि विकास कार्यालयले ५० हजार...
बाँझो जमिनको उपयोगिताबारे कृषि रणनीति अस्पष्ट
काठमाडौँ, १३ भदौ । लामो प्रतीक्षापछि जारी गरिएको बीसवर्षे कृषि रणनीति (२०१५÷३५) प्रति अन्ततः सम्बन्धित सङ्घसंस्था तथा कृषि विज्ञले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । साउन १० गते नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको ‘कृषि विकास रणनीति’ खाद्यका लागि कृषि अभियान नेपाल, राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालका प्रतिनिधि र अगुवा कृषकले भूमिपतिको पक्षमा रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । ती संस्थाका प्रतिनिधिले रणनीति तयार गर्दागर्दै पनि विरोध जनाएका थिए । नेपालको भूमि बुझेका विज्ञ र नेपाली माटो चलाएका कृषकबाट कृषि रणनीति तयार हुनुपर्छ भन्ने...
‘मिल्क होलिडे’ हुन दिँदैनौं : कृषि सचिव
काठमाडौं, भदौ १० । कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले ‘मिल्क होलिडे’ कुनै पनि हालतमा हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । भूकम्प, बन्द, हडताल जस्ता कारणले किसानको दूध खपतमा कमी आएको र त्यसले हुन सक्ने मिल्क होलिडे रोक्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममासचिव भट्टराईले घाटा नलाग्ने गरी नाफा बिना पनि किसानको दूध खेर जान नदिइ मिल्क होलिडे रोक्न विशेष पहल गर्न दुग्ध विकास संस्थानलाई निर्देशन दिए । नेपाल डेरी एसोसियसनका अध्यक्ष सुमित केडियाले राज्यले ध्यान नदिए दुग्ध किसानहरुको दूध बिक्री नभइ...
उन्नत जातको बीउको प्रयोग बढ्यो
रामपुर (पल्पा), ९ भदौ । धेरै आम्दानी लिन हिजोआज कृषकले स्थानीय जातको बीउको सट्टा उन्नत जात (हाइब्रीड)को बीउ प्रयोग गर्न थालेका छन् । तरकारी, खाद्यान्न, फलफूलको व्यावसायिक रुपमा खेती गर्ने कृषकले विगत केही वर्षदेखि स्थानीय बीउको तुलनामा जातको बीउको प्रयोग गरेका छन् । छोटो समयमा स्थानीय जातको तुलनामा उन्नत जातको बीउबाट उत्पादन राम्रो लिन सकिने भएको हुँदा अहिले कृषकले स्थानीय बीउलाई छोडेर यसको प्रयोग गर्न थालेका हुन् । कृषकले खाद्यान्न बालीअन्तर्गत धानमा स्थानीय जातको विकल्पमा उन्नत जातको यू यस ३१२ च्यापियन, राजा गोरखनाथजस्ता बीउको प्रयोग गरेका छन् ।...
चित्लाङको आकर्षण – बाख्राको चिज र आरुबखडाको वाइन
काठमाडौँ, ५ भदौ । गाईभैँसीको दूध बिक्री हुन्छ र गरिन्छ भन्ने जो कोहीलाई पनि थाहा छ । तर बाख्राको दूध पनि बिक्री हुन्छ भन्ने विषय सबैको जानकारीमा नहुन सक्छ तर बाख्राको दूध र चिज बिक्री गरेर अशोककुमार सिंह ठकुरी लखपति बन्नुभएको छ । पहिले पहिले धार्मिक आवश्यकता पूरा गर्नका लागि मात्र बाख्रा पालिने प्रचलन थियो । तर हिजोआज आर्थिक उपार्जनको प्रमुख मेरुदण्ड बनेको बाख्रापालन व्यावसायिक बन्दै गएको छ । ठकुरी मकवानपुर, चित्लाङ निवासी हुनुहुन्छ । २०५९ सालमा फ्रान्समा पुगी बाख्रापालन तालिम लिनुभएको थियो उहाँले । रु दुई लाख ५० हजारको जागिर पेरिसमा तिरस्कार गरी...
धादिङ, एउटा बोकाको मूल्य कति होला ? सामान्यतः ५-१० हजार तथा बढीमा १५ हजार रुपैयाँ । सुन्दा अचम्म लाग्ला । धादिङमा एउटै बोका झन्डै २ लाख रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । धादिङका कृषक नवराज आचार्यले एउटै बोका बेचेर १ लाख ९५ हजार रुपैयाँ कमाएका छन् । धादिङ, केवलपुर गाविसका आचार्यले बाग्मती गोट सिड्स स्थापना गरेर बाख्रा पालन सुरु गरेको १२ वर्ष भयो । बोयर जातको बाख्रा पालनमा लागेका आचार्य अहिले वाषिर्क ६० लाख रुपैयाँसम्मको बीउको बोका मात्र बेच्छन् । बोयर जातको खसीको मासु सेतो (ह्वाइट) भएकाले स्वास्थ्यको समस्या भएकाहरूका लागि फाइदाजनक मानिन्छ । त्यसैले होला, यसको माग...
टिमुरखेती व्यवसायीकरणको आवश्यकता
रामपुर (पाल्पा), ३ भदौ । टिमुरखेतीलाई व्यवसायीकरण गर्न नसक्दा पाल्पाका किसानले आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिरहेका छैनन् । जनचेतनाको कमीले गर्दा टिमुरको व्यावसायिक खेती गरी उपयोगमा ल्याउन नसक्दा व्यावसायिक तवरले सफलता प्राप्त गर्न नसकिएको हो । मानव स्वास्थ्यलाई अत्यन्त राम्रो मानिने र औषधिका रुपमा प्रयोग हुने भए पनि यसको खेती विस्तार गरी उपयोगिताका विषयमा गाउँका किसानलाई जानकारी दिन नसक्दा अन्य खेतीमा जस्तो टिमुरखेतीमा किसानको आकर्षण नभएको गोठादी गाविसका कृषक वीरबहादुर चिदी बताउनुहुन्छ । यस प्रजातिको बोटमा काँडा हुने, काँडाले घोच्यो भने घाउ...
३६ करोडको आलु उत्पादन
बाबियाचौर (म्याग्दी), २ भदौ । म्याग्दीमा एकै मौसममा रु ३६ करोडभन्दा बढी मूल्यबराबरको आलु उत्पादन भएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार एक हजार २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा आलुखेती भएकोमा १० हजार ५०६ मेट्रिक टन उत्पादन भएको कार्यालयका बागवानी विकास अधिकृत वासुदेव पौडेलले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा उत्पादन भएको आलु रु ३० देखि रु ४० प्रतिकिलोका दरले बिक्री भएको छ । कृषक व्यावसायिक बन्नु, उन्नत जात भित्रिनु, पुरानो खेती प्रविधि आधुनिकीरण बन्दै जानु, अनुदानका कार्यक्रम, बीउ आलु भण्डार गृह निर्माण हुनु, बजारको पहुँच विस्तार, अन्य बालीको तुलनामा सजिलो र नगद...